Mpiasa, Vehivavy, Ahmadinejad & Ayatollahs · Global Voices teny Malagasy
Mpiasa, Vehivavy, Ahmadinejad & Ayatollahs
Voadika ny 05 Marsa 2019 4:58 GMT
Noresahan'ireo bilaogy iraniàna ny momba ny fihetsiketsehana tamin'ny 1 May tao Tehran sy ny fanapahankevitr'i Ahamdinejad hamela ny vehivavy ho afaka hiditra kianja fanaovana fanatanjahantena mba hijery lalao baolina kitra. Voaresaka tany anatin'ireo bilaogy iraniàna sy manerana izao tontolo izao ilay fanapahankevitry ny filoha, toy ny tao amin'ny fandaharana “Have Your Say” an'ny BBC.
Jomhour milaza, araka ny ILNA (Iranian Labour News Agency), fa anjatony maro ireo iraniàna mpiasa no tonga avy any amin'ny lafivalon'ny firenena nankao Teheran mba hanao fihetsiketsehana nanoloana ny masoivoho amerikàna. Lazain'ilay bilaogera fa tsy takany ny antony anaovan-dry zareo ireo fihetsiketsehana manoloana ny masoivoho amerikàna fa tsy eo anoloan'ny Ministeran'ny Asa. Soratan'i Jomhour ao amin'ny bilaoginy ny sasantsasany tamin'ny teny faneva nentin'ireo mpiasa, toy ny hoe Henatra ho anareo ao amin'ny Ministeran'ny Asa, Tapitra ny taona fa izahay tsy mbola mandray karama ihany.
Azo jerena ao amin'ny bilaogin'i Azarmehr ny antsipirihany bebe kokoa momba ilay fihetsiketsehana sy ny nivadihany ho feno herisetra.
Azarmehr, bilaogera iray monina ao Londona, milaza hoe:
“Betsaka ireo famoriambahoaka tamin'ny Andron'ny Asa, nataon'ireo iraniàna mpiasa sy mpianatra no voatafika tao Iràna androany. Nifamory teo ivelan'ny foibe fametrahana ny fiara fitaterana tao amin'ny arabe Hengam ireo mpamily fiara fitaterambahoaka tao Iràna, nihiaka ny teny faneva hoe “Zonay mibaribary ny angovo nokleary”. Nanatevina laharana ilay famoriambahoaka ihany koa ireo mpianatra tao Iràna, nihika ny hoe “Ry Mpiasa, ry Vehivavy, Mivondrona isika”. Minitra vitsy monja taorian'ny nanombohan'ilay famoriambahoaka, anefa, nilazan'ny Tafika Mpampihatra Lalànan'ny Repoblika Islamika ireo mpiasa sy mpianatra mba hiparitaka. “
Bilaogera iray hafa avy ao Iràna no mampahafantatra antsika ny momba ny kabarin'i Ahmadinejad’ tamin'ny 1 May.
Pouyashome no miresaka ny kabarin'i Ahmadinejad tamin'ny 1 May ary milaza fa araka ny ISNA (persiàna) nilaza tamin'ireo mpiasa ny filoha Iraniàna fa zavatra tsara ny fananganana sendikà. Ampian'ilay bilaogera fa ireo mpamily fiara fitaterambahoaka dia efa nanao io zavatra tsara io ary haintsika izay nanjo azy ireo, voadaroka ireo mpiasa no sady nosamborina .
Olana iray mavaivay ny momba ny zon'ireo vehivavy handeha any amin'ireo toerana fanaovana fanatanjahantena mba hijery lalao baolina kitra sy ireo Ayatollhas Lehibe vitsivitsy manohitra azy io.
Mifanohitra amin'ny an'ny maro hafa, Alpar, bilaogera monina ao Iràna, milaza hoe inoany fa i Ahmadinejad tsy nandray io fanapahankevitra io mba hilalaovana lalao politika saropady. Ho an'ity bilaogera ity, mba hahazoana laza no nanaovan'i Ahmadinejad azy io saingy tsy voakajiny ny ho fanehoankevitr'ireo Ayatollahs Lehibe. Hoy izy:
“Tsy dia nampihena loatra ny mpifidy azy ny fanehoankevitr'i Ahmadinejad momba ny Famonoana Faobe – Holocaust – sy ny fanakianan'ireo mpanohitra azy. Ity fanapahankevitra vao haingana momba ny toerana fanaovana fanatanjahantena ity no tena felaka hampidina ny vatony…. Maro ireo Miozolmana izay nivavaka mba hampahomby ny governemantany, no miantso an'Andriamanitra ankehitriny mba hitondra azy io hiverina amin'ny làla-mahitsy. Tsy ninoany ny hoe nilaza izany fotsiny mba hahazoana laza izy.”
Na i Masoud Rahbari aza dia maka ny fomba fijerin'i Alpar, saingy mihevitra ny tsaratsara kokoa izy momba io fanapahankevitra io. Hoy izy : “natetika no nidera ny lasitra sinoa ireo gazety sasantsasany ambany fahefan'ny governemanta, lasitra izay ahitàna sombintsobina fahalalahana ihany eny anatin'ny fiainana sosialy sy toekarena, fa tsy any anatin'ny fiainana politika “. Amin'ny fanomezana fahalalahana ho an'ireo vehivavy mba ho afaka mandeha any amin'ireo toerana fanaovana fanatanjahantena, azo antoka fa nanaraka io lasitra io ry zareo (governemanta). Hoy ny voasoratr'ilay bilaogera :
“Mihoatra lavitra noho izay nanosika an'i Ahmadinejad’, tsy maintsy faly ireo mpitaky fanavaozana hoe nahazo ny toerany tao anaty fandaharanasan'ny Filoha ny iray tamin'ireo laharam-pahamehany: ny zon'ny vehivavy. Afaka misaotra azy tsy amin-kenatra ry zareo.”
Ao anatin'ny bilaoginy, resahan'ny bilaogera iray monina ao Iràna ny momba ny endrika ara-pinoana ananan'io fanapahankevitra io. Hojreh, tanora mpitarika fivavahana & bilaogera, miteny fa nifandray taminà Ayatollah Lehibe iray ao Tehran izy ary io mpitarika fivavahana io dia tena tezitra mafy amin'ny Filoha. Hojreh mametraka fanontaniana toy ny hoe :
Maninona ireo mpianatra mpandalina ny finoana no tsy manao fihetsiketsehana manohitra ilay fanapahankevitry ny governemanta ? Misy anavahan-dry zareo an'ity governemanta ity amin'ireo teo alohany ve? Raha tsy dia manandanja loatra ka tsy mila anaovana fihetsiketsehana ity olana ity, nahoana ireo Ayatollahs Lehibe no niresaka momba azy? Farany, nahoana no mangina ireo Ayatollahs Lehibe hafa ary tsy sahy maneho ny heviny.
Manana fijery iray hafa momba ireo Ayatollahs Lehibe i Sibestan. Lazainy fa ny lanjan'ny didy avoakan'ireo Ayatollahs Lehibe dia voafetra ho an'ireo mpanaraka azy ihany. Ampiany hoe ny filoha iraniàna dia nanomboka nandray anaty kajikajy ny fomba fihevitry ny vahoaka ary indrindra fa ny an'ireo vehivavy. (Persiàna)
Ao anatin'ny Zanevesht, azontsika vakiana ny hoe antsasany amin'ny fahalalahana ny zon'ireo vehivavy ary matoa ny vehivavy mahazo zo dia noho ny tolon'ireo hetsika ho an'ny vehivavy, niainga avy any anaty fon'ny fiarahamonina.